Ity angamba no sary mihetsika tsara indrindra amin'ny taona | Famoronana an-tserasera
Ny kalitaon'ny sary mihetsika dia manana hatsarana lehibe ary io no izy afaka minitra vitsy dia afaka mamela antsika ho babo isika ho an'ny atin'ny hafatra izay entin'izy ireo ao an-kibon'izy ireo mba hahatonga ny ranomasontsika hitomany na hitsiky toy ny tsy nisy hatrizay isika noho ny tantara tsara asehon'izy ireo ao anatin'ny minitra faharetana izay matetika ananan'izy ireo.
Ity sary miaina ity indrindra no an'ny horonantsary mozika "Ma'agalim" nataon'i Jane Bordeaux ilay iray izay mety hiteraka ireo fahatsapana rehetra ireo hoy, hatramin'ny nostalgia sy ny alahelo hatramin'ny fifaliana tsy manam-petra. Fampisehoana fohy iray izay tsy mihoatra ny 3 minitra sy 31 segondra hamela antsika ho talanjona amin'ilay hevitra tena lehibe, izay ilay kofehy ihany ary ilay kodiarana tsy manam-petra izay mampiseho tarehin-tsoratra samy hafa amin'ny sehatra isan'andro.
Ny ekipan'ny sarimiaina dia manao a miasa tsara miaraka amin'ity sombin-tsary ity izay, miaraka amina fomba tena manokana sy endri-tsoratra namboarina tsara, dia entiny mankany amin'ny horonantsary mozikan'i Jane Bordeauxde izahay. Lahatsary iray izay tadiavina fomba iray hanehoana fomba fisainana vaovao momba ny fiainana an-tany, zavatra iray izay ateraky ny olombelona tahaka ny fahaterahana.
Miezaha hampita ilay fahatsapana fa rehefa manomboka ny fiainanao dia toa tsy manam-petra, fa rehefa mandeha ny taona dia lasa zavatra fohy sy voafetra izy io. Tsy misy mahalala ny isan'ny andro amin'ny fiainantsika, toy ny mitranga isaky ny fihodinan'ny varingarina ao amin'ilay horonan-tsary.
Namboarina tamin'ny sary mihetsika amin'ny solosaina ary ny haavon'ny kalitao dia noho ny fandanjalanjana lehibe eo anelanelan'ny firafitra sy ny horonan-tsary, dia sary mihetsika mahafinaritra iray izay mety ho lasa iray amin'ny voalohany indrindra amin'ny taona.
Toy ny mahazatra rehefa miresaka momba ny sary mihetsika isika dia mahatadidy ihany sarimihetsika studio ghibli y ho an'i Miyazaki lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ity angamba no sary mihetsika tsara indrindra amin'ny taona